Apple inoratidza makore gumi emakore eiyo iPhone, asi "zvakanakisa zvichiri kuuya" | IPhone nhau
Apple inoratidza gore regumi reiyo iPhone, asi "zvakanakisa zvichiri kuuya"
Gore richangotanga igore remvura yeApple, iro rinokosha zvikuru uye rine kukosha kukuru kwekufananidzira. 2017 inoratidza gore regumi rekutanga kweiyo yekutanga iPhone, pamwe chigadzirwa chekupedzisira icho Steve Jobs chakakonzera shanduko chaiyo asati afa. Kubva iyo yekutanga iPhone, kutaurirana hakuchisiri izvo zvavaive uye zvisinei nekwatino tarisa, ese mafoni aripo, echero yakasimba, anoyeuchidza zvisingaite yeiyo yekutanga iPhone.
Kune rumwe rutivi, 2016 raive gore rekutanga mumakore gumi nematatu iro Apple rakaona kudzikira mukutengesa, mari nemari. Chikonzero chikuru, asi kwete chega chikonzero, ndechekuti kutengesa kwe iPhone kwa "zorora" (mamirioni gumi mayuniti akatengesa zvishoma mukota yekutanga yegore rapfuura chete). Kudhura zvakanyanya? Kushaikwa kwehunyanzvi? Kukwikwidzana pakati pemafemu asvika kumatenga asingafungidzike? Chero zvazvingaitika, Apple ine iyi mbiri yekufananidzira uye hupfumi mutoro, Tim Cook anochiziva, uye kunyangwe ichipemberera gore regumi reiyo yekutanga iPhone, panguva imwechete iyo inovhura yambiro kune nevders iyo, tinotarisira, yakazadzikiswa zvechokwadi: "Zvakanakisisa zvichiri kuuya".
iPhone: makore gumi ekushandurwa
Apple yakaburitsa chinyorwa chakanzi "iPhone pagumi: chimurenga ichienderera mberi." Mune ino chinyorwa, kambani inoyeuka izvo zvatova Makore gumi akareba asi anokurumidza apfuura kubvira muna Ndira 9, 2007, apo Steve Jobs paakafumura iyo yekutanga iPhone, uye panguva imwechete fungisisa nezvekuti iyo iPhone yauya sei mukati menguva yese iyi.
Kune avo vasingazive iyo nyaya, kuti Ndira 9, 2007, mushakabvu Steve Jobs akatora danho reMacworld ndokuti kune vateereri vanotarisira: «Nguva nenguva, chigadzirwa chechimurenga chinouya chinoshandura zvese». Akanga achireva iyo iPhone, asi panguva iyoyo chaiyo isu hatina kuziva.
Mukuburitswa kwenhau, Apple inodzoreredza kutaura kwekufananidzira kunoshandiswa naSteve Jobs kuzivisa kuuya kweiyo iPhone: "yakafara iPod ine batai zvekubata, shanduko nharembozha uye budiriro yeinternet yekutaurisa kifaa", ndokuti, iPod, runhare uye mudziyo weinternet zvese mune imwechete.
Kubva ipapo, Apple inoenderera ichitsanangura izvo iyo iPhone yakaramba ichichinja indasitiri yemafoni efoni, uye tora mukana wekuratidza izvozvo yatengesa zvinopfuura bhiriyoni iPhone zvigadzirwa uye yagadzira mhando nyowani dzechigadzirwa.
Uye zvakare, Apple iri kunongedza mamirioni emaapplication ayo ave akakosha kune hupenyu hwevanhu hwezuva nezuva Kutenda kune iyo iPhone uye neApp Store.
Apple CEO Tim Cook akataura mupepanhau kuti ikozvino kupfuura nakare kose, iyo iPhone iri kutsanangudza zvakare nzira iyo vatengi vanorarama, kushanda, kutaurirana uye kufadza. Uye hongu zvakare akataura izvozvo "Zvakanakisisa zvichiri kuuya" ye iPhone.
Iyo iPhone chikamu chakakosha chehupenyu hwevatengi vedu, uye nhasi kupfuura nakare kose iri kutsanangura zvakare nzira yatinotaurirana nayo, kuvaraidza, kushanda uye kurarama. Iyo iPhone yakaisa muyero wecomputer komputa mumakore gumi ayo ekutanga uye isu tiri kungotanga. Zvakanakisisa zvichiri kuuya.
Phil Schiller, mutevedzeri mukuru weApple wekushambadzira kwepasirese, anozviona iPhone inoramba iri iyo 'goridhe standard' inopesaniswa nemamwe mafoni ese.
Zvinoshamisa kuti kubva paiyo yekutanga iPhone kusvika yanhasi nyowani iPhone 7 Plus, yakaramba iri yegoridhe standard iyo mamwe mafoni ese anotongwa. Kune vazhinji vedu, iyo iPhone rave iro rakanyanya kukosha mudziyo muhupenyu hwedu uye tinochida.
Nhasi uno chiyeuchidzo chegumi chekuziviswa kweiyo iPhone, asi June 29 icharatidza makore gumi kubva payakatangwa, saka gore rino nhau huru inotarisirwa, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoratidza gore regumi reiyo iPhone, asi "zvakanakisa zvichiri kuuya"
CoolBooter inokutendera kuti ushandise maBhaibheri maviri eIOS pane imwe iPhone